IDOZI PC A ENWEGHỊ IKE ỊGBA ỌSỌ NJEHIE WINDOWS 11 - ADỤ
Idozi PC a enweghị ike ịgba ọsọ njehie Windows 11
Enweghi ike ịwụnye Windows 11 na ịnweta PC a enweghị ike ịgba ọsọ njehie Windows 11? Nke a bụ otu esi enyere TPM 2.0 na SecureBoot aka, iji dozie PC a enweghị ike ịgbanye njehie Windows 11 na ngwa PC Health Check.
Microsoft kwupụtara nwelite a nọworo na-eche ogologo oge maka Windows 10, sistemụ arụmọrụ kọmputa akụrụngwa kachasị n'ụwa niile, Microsoft mechara kwuo izu ole na ole gara aga (June 2021) Dika aturu anya, Windows 11 gha eweputa otutu ihe ohuru, ngwa nke ndi ala, ya na ndi mmadu ndi mmadu gha enweta ihe ngosi ha, mmeghari egwu, nkwado maka ngwa gam akporo, wijetị, wdg. Ihe ndị dị ka menu mmalite, etiti ihe , na Storelọ Ahịa Microsoft ka emezigharịrị kpamkpam maka ụdị Windows kachasị ọhụrụ. Ndị ọrụ Windows 10 dị ugbu a ga-ekwe ka ha kwalite na Windows 11 na-enweghị ụgwọ ọ bụla ọzọ na njedebe nke 2021, mgbe e mere ka nsụgharị ikpeazụ nye ọha na eze.
Nzọụkwụ Idozi ma ọ bụrụ na PC gị enweghị ike ịgba ọsọ njehie Windows 11
Ihe sistemu chọrọ maka Windows 11
Usoro 1: Otu esi enyere TPM 2.0 aka na BIOS
Method 2: Kwado urenọ ná Ntụkwasị Obi buut
Tinyere ịkọwa mgbanwe niile nke Windows 11 ga-eweta, Microsoft kpughere opekempe ngwaike iji rụọ OS ọhụrụ. Ha bụ ndị a:
Ihe nhazi 64-bit nke oge a nwere ọsọ elekere nke 1 Gigahertz (GHz) ma ọ bụ karịa na 2 ma ọ bụ karịa cores (Nke a bụ ndepụta zuru ezu nke Intel , AMD , na Ndị na-arụ ọrụ Qualcomm nke ahụ ga-enwe ike ịgba ọsọ Windows 11.)
Opekempe 4 gigabytes (GB) nke RAM
64 GB ma ọ bụ nnukwu nchekwa nchekwa (HDD ma ọ bụ SSD, nke ọ bụla n'ime ha ga-arụ ọrụ)
Ngosipụta nke nwere mkpebi kacha nta nke 1280 x 720 ma buru ibu karịa 9-anụ ọhịa (diagonally)
Femụwe sistemụ ahụ ga-akwado UEFI na Secure Boot
Ntụkwasị obi Platform Module (TPM) mbipute 2.0
Kaadị eserese esemokwu kwesịrị dakọtara na DirectX 12 ma ọ bụ mgbe e mesịrị na WDDM 2.0 ọkwọ ụgbọala.
Iji mee ka ihe dị mfe ma nye ndị ọrụ ohere ịlele ma sistemụ ha dị ugbu a na Windows 11 site na pịa otu pịa, Microsoft wepụtara PC Health Check ngwa . Agbanyeghị, njikọ nbudata maka ngwa ahụ adịkwaghị n'ịntanetị, ndị ọrụ nwere ike ịwụnye oghere na-emeghe WhyNotWin 11 ngwá ọrụ.
Ọtụtụ ndị ọrụ nwere ike itinye aka na ngwa Health Check ekwuola na ịnata PC a enweghị ike ịme ozi pop-up Windows 11 na-agba ọsọ ego. Ozi mmapụta na-enyekwa ozi ndị ọzọ na ihe kpatara na Windows 11 enweghị ike ịgba ọsọ na sistemụ, ihe kpatara ya gụnyere - a naghị akwado ihe nhazi, ebe nchekwa dị obere karịa 64GB, TPM na Secure Boot anaghị akwado / nwere nkwarụ. Mgbe ị na-edozi okwu abụọ mbụ ahụ ga-achọ mgbanwe akụrụngwa na-agbanwe agbanwe, nsogbu TPM na Secure Boot nwere ike idozi ya ngwa ngwa.
akụrụngwa ntanetị adịghị
Modul Platform Tụkwasịrị Obi ma ọ bụ TPM bụ mgbapụta nche (cryptoprocessor) nke na-enye ọrụ ngwaike, ọrụ metụtara nchekwa na kọmputa Windows nke oge a site na ịchekwa igodo nzuzo. Mkpụrụ TPM gụnyere ọtụtụ usoro nchedo anụ ahụ na-eme ka o siere ndị na-agba ọsọ, ngwa ọjọọ, na nje virus ịgbanwe ha. Microsoft nyere iwu iji TPM 2.0 (ụdị nke TPM ibe ọhụrụ. A na-akpọ nke gara aga TPM 1.2) maka sistemụ niile arụpụtara post-2016. Y’oburu na komputa gi abughi ihe mgbe ochie, o yikarịrị ka a na-agbanye mgbawa nche n’elu motherboard gị mana ọ nwere nkwarụ.
Ọzọkwa, ihe achọrọ nke TPM 2.0 iji gbaa Windows 11 jidere ọtụtụ ndị ọrụ na mberede. Tupu mgbe ahụ, Microsoft edepụtara TPM 1.2 dị ka ihe ngwaike kachasị dị mkpa ma mesịa gbanwee ya na TPM 2.0.
Enwere ike ijikwa teknụzụ nche TPM site na menu BIOS mana tupu ịmalite ya, ka anyị hụ na a kwadebere sistemu gị na TPM Windows 11 dakọtara. Iji mee nke a -
1. Pịa aka nri na bọtịnụ menu mmalite wee họrọ Na-agba ọsọ site na njirimara onye ọrụ ike.
windo agaghị emelite ruo 1903
2. .dị Ugochi Nwachukwu na mpaghara ederede ma pịa bọtịnụ OK.
3. Nwee ndidi chere TPM Management na mpaghara ngwa Kọmputa iji bido, lelee Ọkwa na Versiondị nkọwapụta . Ọ bụrụ na ngalaba Ọnọdụ gosipụtara 'TPM dị njikere maka ojiji' na ụdị a bụ 2.0, ngwa Windows 11 Health Check nwere ike ịbụ onye mejọrọ ebe a. Microsoft n’onwe ha ekwuola okwu a ma werekwa ngwa ahụ. A ga-ewepụta usoro dị mma nke ngwa Ahụike Nlekọta.
Ọzọkwa Gụọ: Kwado ma ọ bụ gbanyụọ nbanye echedoro na Windows 10
Agbanyeghị, ọ bụrụ na Ọnọdụ ahụ na-egosi na TPM na-apụ apụ ma ọ bụ na enweghị ike ịchọta ya, soro usoro ndị a iji nyere ya aka:
1. Dịka e kwuru na mbụ, enwere ike ịme TPM naanị na menu BIOS / UEFI, yabụ bido site na imechi windo ngwa niile nọ n'ọrụ ma pịa Alt + F4 ozugbo ị nọ na desktọọpụ. Họrọ Mechie site na nhọrọ nhọrọ wee pịa OK.
iTunes anaghị arụ ọrụ windo 10
2. Ugbu a, bidogharịa kọmpụta gị wee pịa igodo BIOS iji tinye menu. Na Igodo BIOS pụrụ iche maka ndị nrụpụta ọ bụla ma enwere ike ịchọta ya site na ịme ngwa ngwa Google ma ọ bụ site na ịgụ akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ. Igodo BIOS kachasịkarị bụ F1, F2, F10, F11, ma ọ bụ Del.
3. Ozugbo itinyere BIOS menu, chọta Nche taabụ / ibe ma gbanwee ya site na iji igodo igodo keyboard. Maka ụfọdụ ndị ọrụ, a ga-ahụ nhọrọ nchekwa n'okpuru Ntọala di elu.
4. Na-esote, chọta ebe Ntọala TPM . Ihe akara ngosi ahụ nwere ike ịdị iche; dịka ọmụmaatụ, n'ụfọdụ sistemụ Intel, ọ nwere ike ịbụ PTT, Intel Tụkwasịrị Obi Platform Technology, ma ọ bụ naanị TPM Security na fTPM na igwe AMD.
5. Nịm ndị Ngwaọrụ TPM ọnọdụ Dị na Steeti TPM ka Kwadoro . (Dị njikere na ị ghara ọgbaghara na ihe ọ bụla ọzọ TPM metụtara ntọala.)
google chrome kwụsịrị ịrụ ọrụ na windo 7
6. Chekwa ọhụrụ TPM ntọala na reboot kọmputa gị. Gbaa Windows 11 nyocha ọzọ iji kwado ma ọ bụrụ na ị nwere ike idozi PC a enweghị ike ịgba ọsọ njehie Windows 11.
Otnọ na nche, dị ka aha ahụ na-egosi, bụ atụmatụ nchekwa nke na-enye ohere sọftụwia tụkwasịrị obi na sistemụ arụmọrụ ka ọ buo. Na ọdịnala BIOS ma ọ bụ ihe nketa buut ga-ebu bootloader na-enweghị ịme nlele ọ bụla, ebe ọgbara ọhụrụ UEFA buut technology echekwa ukara Microsoft asambodo na cross-achọpụtazi ihe niile tupu loading. Nke a na-egbochi malware ka ọ ghara imebi ihe na usoro buut ma, ya mere, na-ebute nchekwa nchekwa zuru oke. (Bootkwado boot dị ka ama ama na-akpata nsogbu mgbe ị na-ebupụta ụfọdụ nkesa Linux na ngwanrọ ndị ọzọ na-ekwekọ.)
Iji lelee ma kọmputa gị na-akwado teknụzụ echedoro, pịnye Ugboko 32 na Run Command igbe (Windows logo igodo + R) na kụrụ tinye.
Lelee Nweta Steeti buut akara.
Ọ bụrụ na ọ gụọ ‘akwadoghị ya,’ ị gaghị enwe ike iwunye Windows 11 (n’enweghị aghụghọ ọ bụla); n’aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ọ gụọ ‘Gbanyụọ,’ soro usoro ndị a.
1. Yiri nke TPM, Sec nwere ike nweta Boot echekwara site na menu BIOS / UEFI. Soro usoro 1 na nke 2 nke usoro gara aga tinye menu BIOS .
taskbar na-egosi na ihuenyo chrome
2. Gbanye na Buut taabụ na nwee Nchekwa buut n'iji ogwe aka.
Maka ụfọdụ, nhọrọ iji gbanye otnọ na Nzuzo ga-ahụ n'ime Advanced ma ọ bụ Nche menu. Ozugbo ị gbanyere Secnọ ná Ntụkwasị Obi, a ozi na-arịọ nkwenye ga-apụta. Họrọ Nabata ma ọ bụ Ee ka ịga n'ihu.
Mara: Ọ bụrụ na a na-agbapụ nhọrọ Boot Secure, hụ na agbanyela ọnọdụ Boot na UEFI ma ọ bụghị Legacy.
3. Chekwa mgbanwe na ụzọ ọpụpụ. Ikwesighi inwetakwa PC a enweghi ike igba ozi njehie Windows 11.
Microsoft na-agbadata ala na nchekwa yana ihe TPM 2.0 na Secure Boot iji gbaa Windows 11. Agbanyeghị, ewela iwe ma ọ bụrụ na kọmputa gị ugbu a anaghị erute opekempe usoro chọrọ maka Windows 11, ebe ọ bụ na ọ ga-achọpụta nsogbu ndị na-enweghị nsogbu. chọpụta nke ọma mgbe a ga-ahapụ ụlọ ikpeazụ maka OS. Can nwere ike ijide n'aka na anyị ga-ekpuchi ebe ndị ahụ na-arụ ọrụ mgbe ọ bụla ha dị, yana ọtụtụ ntụziaka Windows 11 ndị ọzọ.
onye ebi ederede na njehie steeti windo 10
windo 10 taskbar anaghị arụ ọrụ
enweghị ike iwepụ dns resolver cache
ndabara ụzọ ámá adịghị windo 10 wifi
windo 10 ikuku na-akwusi ugboro ugboro